(Waxaa laga soo toosiyay Portal:Africa)
Afrika (; ) waa qaarada labaad ee ugu weyn qaaradaha aduunka kadib qaarada Aasiya dhanka baaxada iyo dhanka dadkaba. Baaxada Afrika waxay la'egtahay c. 30,244,050 km² (11,677,240 mi²) tiradaas waxaa ku jira dhamaan jasiiradaha lagu xisaabo Afrika. Afrika baaxadeeda waxay dabooshaa 20.3% baaxada dhulka oo dhan. Sida lagu xusay tirokoob caalami ah oo la sameeyay sanadkii 2013ka waxaa ku nool qaarada Afrika dad tiradooda ay dhantahay 1.1 bilyan taasi oo ah tiro u dhiganta todobo qeyboodoo qayb dadka dunida ku noolo maanta.
Qaahiro ayada oo habeen ah
Qaahiro (; ) waa caasimada dalka Masar. Qaahira waa magaalada ugu wayn Afrika waxayna ku taalaa Masar Qaahira waxay leedahay taarikh wayn iyo guud ahaan dalka Masar. Qaahira diinta lagu dhaqmo waa diinta Islaamka gaar ahaan Sunni waxaana magaalada ku taalo jaamacadda wayn ee Al Azhar inkastoo diima kale lagu dhaqmo laakiin diinta aabaha wadanka Masar waa diinta Islaamka gaar ahaan mad habta Sunniga.
Xayawaanka ugu orodka dheer aduunka: Harimacadka waxaa laga helaa kaliya Qaarada Afrika.
Cumar Dhuule (; ) wuxuu ahaa fanaan ka mid ahaa fanaaniinta ugu caansanaa suugaanta dadka Soomaalida ah. Fanaanku waxuu horaantii 1941dii ku dhashay duleedka magaalada Burco gobolka Togdheer ee maanta ka tirsan wadanka Somaliland. Fanaanku wuxuu ahaa heesaa aad u cod macaan oo geyiga Soomaalieed aad looga jecel yahay. Codkiisa wanaagsan darteed waxaa lagu naaneysi jirey Boqorka Qaaciga Fanka Soomaaliyeed.